I-china Outdoor led ledboard ekhanyisiwe yabakhiqizi begrosa kanye nabaphakeli | UZhengcheng
Iphaneli ye-acrylic esetshenziselwa ukwenza ibhodi lokungena linombala ogcwele, ukuhanjiswa okuphezulu kokukhanya, neshubhu ye-LED enelungelo lobunikazi ngokukhanya okuphezulu. Isithombe esihle sezimpawu singadonsela ukunaka kwamakhasimende angahle abe khona.
Igama lomkhiqizo: Ibhodi yezimpawu ekhanyisiwe engaphandle
Kungani ukhetha umkhiqizo wethu?
1. Singumkhiqizi wezimpawu zebhokisi elikhanyayo. Ifektri ihlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-4,200. Sisebenza ngokukhiqiza izimpawu zomnyango. Sinesipiliyoni esicebile ekukhiqizeni nasekukhiqizeni. Ngaphezu kwalokho, akekho umuntu ophakathi nendawo ozothola amakhomishini. Sizokunikeza intengo enhle kakhulu.
2. Ishidi le-acrylic esilisebenzisayo yishidi le-Mitsubishi acrylic elivela eJapane ukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi yomkhiqizo isezingeni eliphezulu impela. Imikhiqizo yethu ngeke ikhubazeke noma iphele ngemuva kweminyaka engu-3-5 isetshenzisiwe.
3. Ibhokisi lokukhanya likaZhengcheng lamukela ukwakheka okuyisimo, umzimba webhokisi uvaliwe, awunamanzi ngokuphelele, futhi ngeke ukuthinte ukusetshenziswa kweshubhu eliholelekile.
I-Sichuan Zhengcheng Starlight Energy Saving Technology Co, Ltd. ingumkhiqizi onguchwepheshe wokulondolozwa kwamandla emabhokisini amabhodi wezimpawu zezitolo, ezitolo ezinkulu, ezitolo zamakhemisi, ezitolo. Kusukela yasungulwa, inkampani ithole amalungelo obunikazi e-4 kuzwelonke embonini yokukhiqiza yesitolo esikhanyayo. Inkampani yethu inefektri yobuchwepheshe enendawo engamamitha-skwele angama-4200 namabhokisi wokukhiqiza angama-4 akhanyayo. IZhengcheng njengamanje isebenza ngaphezu kwe-100 brand eChina futhi ikhiqiza amamitha angaba ngu-30,000 wamabhokisi wokonga ugesi minyaka yonke.
Langaphambilini Isitolo esikhulu ngaphambili
Olandelayo: Ukukhangisa kwe-Acrylic okusindisa amandla ibhokisi lezimpawu
I-3d Signboard ekhanyisiwe
I-Bank Outdoor Signboard ekhanyisiwe
I-Signal Signboard ekhanyisiwe
Izimpawu Ezikhanyisiwe, Izimpawu Zokukhangisa, I-Blister Light Box Signboard, Ibhodi lokungena elingaphandle le-Light Light, Umshini Owenza Ibhokisi Elikhanyayo Lebhodi Lesibonakaliso, I-Pharmacy Signboard,